WordPress 3.3 Abịawo | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 13, 2011 Tọzdee, Disemba 13, 2011 Douglas Karr
WordPress 3.3 abịawo! Njikwa interface ojiji bụ mma. Mgbe WordPress meghere menu, ọ dị ka a ga - asị na onye ọ bụla na - emepụta ihe mgbakwunye nọ ebe ahụ kpebiri ịme menu ọhụrụ. Nke a mere ka usoro nchịkọta nhọrọ na WordPress bụrụ ihe na-akụda mmụọ. Ọhụrụ menu oke oke oke oke oke mee ka ọ dị mfe ịpịgharịa ma chọta ihe ịchọrọ. Nlekọta Nlekọta na-arụ ọrụ nke ọma na mbadamba.
Otu ihe mara mma gbakwunyere API bụ ike embed WordPress ederede editọ. Nke a meghere ohere maka ndị mmepe iji jikọta ibe ha njikwa na ndị ndezi. E meziwanye nchịkọta akụkọ ahụ n'onwe ya ịgụnye ịdọrọ na dobe interface, na-enye ohere ka ọtụtụ faịlụ daba na!
Anya dị ka uto nke Tumblr na-atụgharịkwa ụfọdụ isi na WordPress… onye mbubata mbubata Tumblr dị ndụ ugbu a :). WordPress etinyela ndepụta nke mmelite niile na WordPress 3.3 na saịtị ya.